Uyisebenzisa kanjani iSMS ukuphumelela uthando, ukukhokelela, ukungenisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 5, 2013 NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2017 UAdam Omncinci
Imiyalezo ebhaliweyo ibisisiseko sempumelelo yethu nathi ukuthengisa izindlu nomhlaba iqonga. Xa ipropathi ifumana undwendwe, bacela ulwazi ngombhalo ovela kumqondiso esiwubeka elunxwemeni lwabo. Xa impendulo inikezelwa kukhenketho oluhambayo kunye nolwazi kumthengisi, umthengisi waziswa kwangoko kwaye angatsalela undwendwe ukubona ukuba bafuna uncedo. Ukubeka nje, iiarhente zethu ezisebenzisa inkqubo ukuvala iipropathi ngokukhawuleza.
Imibhalo yentengiso ine Iipesenti ezingama-98 ezivulekileyo, iipesenti ezingama-45 zokuphendula kwaye inqanaba lokuguqula abakhokelayo abathunyelwe imiyalezo ebhaliweyo emithathu okanye nangaphezulu emva konxibelelwano lokuqala ngama-328%, kushishino ngokubanzi. Ufunde elo lungelo… kwaye xa uthelekisa nezinye iindlela zokuthengisa, umyalezo obhaliweyo ubhetyebhetye kuwo onke amafowuni. Akukho sidingo soyilo, uphuhliso okanye olunye uhlengahlengiso-thumela nje ulinde impendulo! Qiniseka ukuba usebenza nomntu owaziwayo inkonzo yemiyalezo ebhaliweyo kwaye uhlala ufumana imvume. Ngokungafaniyo nezinye iindlela, isohlwayo sokusebenzisa gwenxa imiyalezo kakhulu.
Khuphela ingxelo epheleleyo ye-Leads360, Imiyalezo ebhaliweyo yokuGuqulwa okungcono kweNtengiso, kwaye ufunde ngakumbi malunga nendlela yokusebenzisa imiyalezo ebhaliweyo ngokufanelekileyo kwinkqubo yokuthengisa
tags: i-SMSukuthengisa ii-smsukuthengisa imiyalezoimiyalezo ebhaliweyoukuthumela imiyalezo
Qhagamshela i-Detox: Fumana ii-Backlinks ezibulala i-SEO yakho